Drogba oo shaaca ka qaaday doorkii muhiimka ahaa ee Mata uu ku lahaa in Chelsea ay ku guuleysato Champions League – Gool FM
Dajiye May 20, 2020
(Yurub) 20 Maajo 2020. Weeraryahankii hore kooxda Chelsea ee Didier Drogba ayaa ka faa’ideystay inuu u dabaal-dego sannad-guuradii siddeedaad ee ka soo wareegatay ku guuleysigii Blues ee tartanka Champions League sanadkii 2012-kii, kaddib markii ay kaga guuleysteen naadiga Bayern Munich.
Dhinaca kale halyeyga reer Ivory Coast ee Didier Drogba ayaa si weyn u ammaanay doorkii uu ka qaatay xiddiga reer Spain ee Juan Mata guushaas muddada dheer la sugayey.
Drogba wuxuu yiri, warbixintii uu soo wariyey wargeysyada “Standard” ee dalka England, kooxda waxay go’aansatay inay iska ceyriso André Villas-Boas, sababa la xiriira natiijooyinka naadiga oo noqday kuwa liita, taasoo lagama maarmaan noqotay inay kulan yeeshaan hoggaamiyeyaasha kooxda oo ay ku jiraan John Terry, Frank Lampard iyo Petr Čech.
Halyeyga kooxda Chelsea ee Didier Drogba oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaas ku sii daray:
“Waxaan go’aansanay inaan wax walba oo awoodeena ah aan ku bixino sida aan ku heli laheyn tartankan, inkastoo ay guuldarro 4-1 ah ay naga soo gaartay kooxda Napoli,”
“Kulanka kaddib, wuxuu cosaday Juan Mata isagoo 23 jir ah inuu naga caawiyo sidii aan ugu guuleysan laheyn Champions League.”
Didier Drogba oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaas ku sii daray:
“Inta uu i soo fiiriyay ayuu igu yiri, ninyahoow adiga Didier Drogba, adiga ayaa iga caawinaya inaan ku guuleysto.”
“Waxaan u sheegay in aan halkan joogay 8 sano oo aan waligey ku guuleysan, marka waxaan aaminay inuu yahay ciyaaryahanka naga caawin doono inaan ku guuleysano, isla markaana aan siin doono haddiyad haddii aan guuleysano”.
Si kastaba ha noqotee, Chelsea oo laga hoggaaminayey natiijada ciyaarta ayaa ku guuleysatay inay soo barbareyso, waxayna ugu dambeyntii hanatay koobka Champions League, kaddib markii ay kaga adkaatay rigoorayaal kooxda Bayern Munich, Drogba ayaana ahaa xiddigii tuuray rigooradii ugu dambeysay.